Burma Must Investigate Rights Abuses: UN Council | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Muslim Athletes MUST Boycott SEA GAMES in Myanmar
Myanmar Military Government had MOCKED this International Day for the Elimination of Racial Discrimination »
Ireland‘s ambassador Gerard Corr, representing the EU, noted that Myanmar had taken important steps “towards political reform, democratisation and national reconciliation, and an improvement in the human rights situation in the country.”
It also called upon the Myanmar government to “undertake judicial reform to ensure the independence, impartiality and accountability of the judiciary, lawyers and prosecutors.”
Myanmar is notamember of the council, but its ambassador to the UN in Geneva, Manug Wai, nonetheless took the floor to say that while his delegation accepted the resolution asawhole, it took exception to “a litany of… allegations, some prescriptive language and misleading wordings.
He said the abuses detailed in the resolution “do not match the situation on the ground,” insisting that Myanmar had made great strides and now embraces “human rights both in theory and in practice.”
Corr also emphasised the “positive steps” Myanmar had taken, “including the release ofasignificant number of political prisoners,” but said that “serious challenges remain.”
Tags: Burma, European Union, Human rights, Meiktila, Myanmar, Thein Sein, United Nations, United Nations Human Rights Council
This entry was posted on March 22, 2013 at 10:35 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Burma Must Investigate Rights Abuses: UN Council”
My FRIEND Ko Maung Khin>>> အကိုရယ် ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ ထူးပြီးပိုမကောင်းလာပါဘူး၊ ၉၆၉လုပ်ရှားမူ့တွေ ဒီလောက်နှစ်ရှည်လများ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်နေတာကို ဒီမိုကရက်တစ်အဖွဲ့အစည်းတွေက လမ်းအမှန်ကိုထိန်းကြောင်းပေးခြင်း၊ လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ကို ပွင့်လင်းတဲ့ မေးခွန်းမထုတ်ခြင်း၊ ရပ်တန့်သွားအောင် အာဏာပိုင်များကို ဖိအားမပေးခြင်း၊ ယုံကလေးနှာစေးနေခြင်းတွေရဲ့ အကျိုးဆက်လို့ပြောရင်လွန်မယ်မထင်ပါ။ (၉၆၉)သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မူ့တွေဟာ ၂၁ရာစုအခင်းအကျင်းနဲ့ကြည့်ရင် အတော့်ကိုနောက်ကျတဲ့ အိုင်ဒီယာအဟောင်းကြီးပါ။ ပြည်ပက ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားအချို့ရဲ့ ထောက်ပြမူ့တွေက ပိုကျယ်နေသေးတယ်။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ အတိုက်အခံအင်အားစု အချို့တောင်ပူးပေါင်းပါဝင်နေတာ အံ့အားသင့်ဖွယ်ကြားနေရတယ်။ Hate Speech နဲ့ Freedom of Speech ကိုခွဲခြားပြီး Denounce မလုပ်နိုင်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်အဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်လိုအားကိုးမလဲ။ မယုံရင် NLD တည်ထောင်ခြင်းအခမ်းအနားမှာ လူရွင်တော် ပန်းသီးရဲ့ပျက်လုံးကို ပြန်ရှာကြည့်ပါ။ အားရပါးရ လက်ခုပ်တီးနေတဲ့ NLD ပါတီးဝင်များကိုကြည့်ပြီး ကျောချမ်းသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် NLD ကိုပဲ မဲပေးမှာပါ။